Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Ny sidina sidina mankany Etazonia dia misondrotra
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao
Ny sidina sidina mankany Etazonia dia misondrotra.
Nitombo ny famandrihana sidina mankany Etazonia taorian'ny fanambarana roa fa hisokatra indray ny toerana haleha ho an'ireo mpandeha vahiny vita vaksiny amin'ny volana Novambra.
Ny tampon'isa voalohany dia natao ho an'ny dia avy hatrany taorian'ny fanalefahana ny fameperana nandritra ny herinandro nanomboka ny 8 Novambra.
Ny tampon'isa faharoa dia tamin'ny Krismasy, nahatratra 16% ny famandrihana nandritra ny herinandron'ny Krismasy ary 14% ny herinandro talohan'izay.
Antenaina amin'ny herinandro ho avy ny fitomboan'ny famandrihana any Etazonia amin'ny vanim-potoana Krismasy.
Ny fikarohana vaovao dia manambara fa ny famandrihana sidina mankany USA dia nisondrotra taorian'ny fanambarana roa fa hisokatra indray ny toerana haleha ho an'ireo mpandeha vahiny vita vaksiny amin'ny volana Novambra. Tamin'ny tapaky ny volana Oktobra, ny famandrihana isan-kerinandro dia nihoatra ny 70% amin'ny haavon'ny pre-pandemic.
Ny fanambarana voalohany dia natao tamin'ny 20th Tamin'ny Septambra, rehefa nilaza ny Trano Fotsy fa ireo mpitsidika avy any Royaume-Uni, Irlandy, ireo firenena 26 Schengen, Shina, India, Afrika Atsimo, Iran ary Brezila dia avela hiditra ao. USA, tsy iharan'ny confinement, raha toa ka vita vaksiny tanteraka izy ireo. Niteraka fanehoan-kevitra avy hatrany izany, miaraka amin'ny famandrihan-toerana isan-kerinandro avy any UK izay nitsambikina 83%, avy any Brezila nitsambikina 71%, ary avy amin'ny EU mitsambikina 185%!
Ny 15 no nanaovana ny fanambarana faharoath Oktobra, raha ny sekretera lefitry ny filoha amerikana, Kevin Munoz, dia nanome anarana 8th Novambra satria hiala sasatra ny famerana ny daty. Niakatra ambony kokoa ny famandrihana isan-kerinandro, nitsambikina 15% avy any UK, 26% avy amin'ny EU ary 100% avy any Brezila.
Raha jerena ny fizarana ny famandrihana voamarina, ho an'ny fahatongavan'ny Novambra sy Desambra, avy amin'ireo tsena telo loharano ireo (Brezila, EU ary UK), misy tampon'isa roa mazava. Ny tampon'isa voalohany dia ny fivezivezena avy hatrany taorian'ny fialan-tsasatry ny fameperana nandritra ny herinandro nanomboka ny 8th Novambra, nahatratra 15% ny famandrihana. Ny tampon'isa faharoa dia tamin'ny Krismasy, nahatratra 16% ny famandrihana nandritra ny herinandron'ny Krismasy ary 14% ny herinandro talohan'izay.
Ity angon-drakitra ity dia mampiseho indray ny fangatahana farany lavitra be amin'ny dia. Avy hatrany dia nahare ny olona fa avela hitsidika ny USA indray; namandrika izy ireo; ary ampahany betsaka no natokana hanidina haingana araka izay azo atao.
Mahaliana ihany koa ny manamarika fa niakatra ambony kokoa ny famandrihana rehefa nomena ny daty voafaritra. Tsy mahagaga izany noho ny antony roa. Voalohany, ny fahazoana antoka ny daty voafaritra dia manentana ny fahatokisana.
Faharoa, ireo izay te hanao dia lavitra alohan’ny faran’ny volana novambra dia tsy afaka nanao fanoloran-tena raha tsy efa fantany tsara fa afaka mandeha amin’ny fotoana tiany. Antenaina amin'ny herinandro ho avy ny fitomboan'ny famandrihana any Etazonia amin'ny vanim-potoana Krismasy.
Fiantraikany amin'ny maha-olombelona: FII Institute
Ny marika Lingerie dia manampy ny vehivavy amin'ny fitiliana ny nono...
Airbus dia manolotra fiaramanidina A220 vaovao voalohany mankany Air France
Toerana fitsangatsanganana ankafizin'ny Amerikana amin'ity fahavaratra...
4 AS namporisika hanangana indray ny fahavononan'i Indonezia...
Nitombo ny fahaveloman'ny homamiadan'ny havokavoka
Nihena ny fahatongavan'ireo mpitsidika any Hawaii sy ny fandaniana tao...
Minisitry ny Fizahantany Jamaika: Tontolo Vaovao Momba ny Fahasalamana &...
Qatar Airways dia nampiantrano ny Fivoriambe faha-54 taonan'ny...
Swoop: Sidina avy any Winnipeg mankany Puerto Vallarta...
Nambara izao ny paikady fampandrosoana ny vaksiny Omicron
WTTC: Arabia Saodita hampiantrano ny 22nd Global...
Boeing dia mandamina raharaha sivily MAX saingy FlyersRights...
Omicron: Loza vaovao sa tsy misy dikany?
Ian Chan avy amin'ny Mirror Boy Group izao dia manohana ny Circle...
EasyJet dia misidina mivoaka ny seranam-piaramanidina Gatwick amin'ny Sustainable ...
Sidina ao amin'ny seranam-piaramanidina Moscow Sheremetyevo amin'ny Qatar Airways...
Etazonia hampitsahatra ny fandrarana ny fitsangatsanganana ho an'ireo mpitsidika vahiny vita vaksiny
eTurboNews Mpitondra hafatra amin'ny resaka zava-dehibe...
Naughty sa Nice? Inona no lisitry ny mpivarotra hipetraka amin'izao fotoana izao?
Litoania hanambara fanjakana maika amin'ny Belarosiana…
Miomana amin'ny tanànan'ny ...